အိုဆာကာမှကျိုတိုကနေသွားဖို့ကဘယ်လို - ကျိုတိုကနေအိုဆာကာသလော - Samurai and Ninja in Japan
အိုဆာကာမှကျိုတိုကနေသွားဖို့ကဘယ်လို – ကျိုတိုကနေအိုဆာကာသလော
အိုဆာကာမှကျိုတိုကနေသွားကြဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အဆိုပါကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ခြင်းမီးရထားနှင့်အခြား transportatin အခြားနည်းလမ်း
အိုဆာကာမှကျိုတိုကနေသွားကြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း အဆိုပါကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထား (ကျိုတို-အိုဆာကာ) ၏ကုန်ကျစရိတ်တလမ်းများအတွက်¥ 1420 ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်¥ 2840 အတွက်အသွားအပြန်အဘို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါကျိုတို-အိုဆာကာ ကျည်ဆန်ရထားစီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 15 မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထား 7:39 pm တွင်ကျိုတိုကနေထွက်ခွာ။ နောက်ဆုံးကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထား 22:40 pm တွင်ကျိုတိုကနေထွက်ခွာ။ တစ်ဦးကျည်ဆန်ရထားကျည်ဆံရထားဝန်ဆောင်မှုတိုင်း 10 မိနစ်ရှိပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်းကြိုတင်ယူထားနိုင်ပေမယ်ကဘူတာရုံမှာလက်မှတ်မဝယ်ဖို့ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
အဆိုပါကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထား၏ဇိမ်ခံအပိုင်းရှိပါသည်။ ဤအပိုင်းကို၏အမည်ကို “အစိမ်းရောင်ကားတစ်စီး၏။ ” သင်ဟာ JR-PASS, အတူဒီအထူးပုဒ်မမသုံးနိုငျသညျ။ သငျသညျ¥ 2360 ပေးဆောင်နေလျှင်အပိုငျသညျကို “အစိမ်းရောင်ကားတစ်စီး။ ” ကိုသုံးနိုင်သည်
ခရီးသွားလာစျေးအချိုဆုံးလမ်းဘတ်စ်ကားယူရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုသန်းခေါင်တိုင်အောင်ရှိပါသည်။ ဘတ်စ်ကား၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်. ¥ 900 ဖြစ်ပါတယ်။ ကကျည်ဆန်ရထားကျည်ဆံရထားထက်3ကြိမ်နှေးကွေးသောကွောငျ့လူအမြားစုကဘတ်စ်ကားကိုရွေးချယ်ကြပါဘူး။ ဘတ်စ်ကားများ၏အချိန်ဇယားကိုစစျဆေးဖို့နှိပျပါ ကဒီမှာ
Categoriesဘလော့ Myanmar TagsBuulet ရထား, ကအိုဆာကာမှကျိုတိုကနေရဖို့ဘယ်လိုကုန်ကျစရိတ်, ကျည်ဆန်ရထားမဘယ်လောက်ကျိုတို, ကျိုတိုကနေအိုဆာကာမှသွားဖို့ဘယ်လိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြန်ဆန်ရထား, ဂျပန်မှကျိုတိုကနေခရီးသွား, ဂျပန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဂျပန်အတွက်ခရီးသွား, ဘတ်စ်ကား, ရထား, လေယာဉ်ပျံ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, အိုဆာကာ